पैसा खाने जुक्ति एउटा कुरो हो, तर धर्म छाड्नु त कहाँ हुन्छ र ! - विवेचना
पैसा खाने जुक्ति एउटा कुरो हो, तर धर्म छाड्नु त कहाँ हुन्छ र !
November 17, 2017 1,319 Views
निर्वाचन त निकै नजिक आइसक्यो माहोल किन तात्दैन ? यति बेलासम्म त निकै काम कुरो भइसक्नु पर्थ्यो । हैन यो कुन खाले चुनाव आउन आँट्यो हँ ? फलानो होटल फलानो पार्टीले फ्रि गरेक‌ो छ, फलानो भट्टी फलानो पार्टीले नि:शुल्क गरेको छ भनेर कसैले भन्दैनन् त ! होटल र भट्टीहरु खुल्ला नगरेसम्म कुनै द्वन्द्व, झडप, कचेडा, लफडा हुँदैन भन्ने सम्मको ज्ञान त पार्टीहरुलाई थाहा हुनुपर्ने ? यसो आठ-दस वटा झडप गरेर अस्पतालका ओच्छ्यान भरिएन भने निर्वाचनको रौनक नै आउँदैन । गाउँ, ठाउँ, बजारका चोक बजारमा स्थानीय ठेउका, ठेट्ने, झोले, नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई सर्काउँदै विपरीत विरोधी पार्टी र तिनका नेताहरुलाई धारे हात लगाएर सत्तो सराप गर्न थालेकै छैनन् ! नेता कार्यकर्ताहरु बिग्रिए कि क्या हो ? तँ पनि घरमै रैछस् त, भोट माग्न गइनस् भन्दै माइल्ाबा आएर आसन जमाए ।
बूढा बोलिरहे – चुनाव लागेको छ, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट पनि मागौँ, गाउँघरको चालामाला पनि बुझौँ, यसपालि अलिक अनौठो किसिमको भोट छ, दुनियाँ के भन्दा राँन्, को को कता कता ढल्किएका, पल्किएका, सल्किएका रहेछन्, कस-कसलाई कस्तो कस्तो उपचार गर्नुपर्ने हो ? मत किनेर भोट जित्न खोज्ने नेताहरुले यसपटक मूल्य कति तोकेका रहेछन्, कुन पार्टीका नेताले बढी दिन्छन् ? यिनै कुराको चियोचर्चो गरौँ भनेर हिँडेको भनेर बूढाले बताए ।
बूढा भलो मतिले गाउँ पसेका होइनन्, यिनलाई निर्वाचनको गाँजाले जफत बनाएको छ भन्ने लागेर बूढाको मन चोर्न मैले सोधेँ – ल भन्नु माइलाबा, कसलाई भोट हाल्नु र्पयो ? कसलाई हाल्दा बढी पोसाउँछ ? बाटो बनाउँछु, पुल बनाउँछु, बिजुली बाल्छु, गाउँमा गाडी कुदाउँछु जस्ता कुरा अब कसैले पत्याउने होइनन् । अढ्चालिस सालदेखि एउटै बाटो देखाएर जनता झुक्याइरहेका छन्, अब मत खसाल्न हाताहाती केही प्राप्त भए हालिन्छ, नत्र त उही हो ! तपाईँका उम्मेद्वारले कति पैसा बाँड्न अराएका छन् ? एउटा मतको कति दिन्छन् ? हामी दुईजना छौँ, गाउँमा मैले भनेको ठाउँमा मत खसाल्ने सौ पचास मान्छे छन् । आफ्नो भतिजसँग कुरो नलुकाई स्पष्ट भन्नु त भनेर मैले सोधेँ ।
बूढाले रिसाउन खोज्दै भने म पैसा बाँड्ने मान्छे हुइँन, पैसा बाँड्छन् भन्ने पनि थाहा छैन, आजसम्म पैसामा मत बेचेको छुइँन, कसले बाँड्छ, कहाँ बाँड्छ, कति बाँड्छ मलाई के थाहा ? पैसा लिएर मत दिनु र आफ्नै रगत बेचेर रक्सी खानु एउटै कुरो हो । त्यस्तो निकृष्ट कोटिको काम गर्ने मान्छे म हुइँन । बूढालाई अझै चाप्नु र्पयो भनेर मैले भने- पैसा तपाइर्ँ नखानु भइगो त, मेरो भोट चाहिँ बेचिदिनु न ! चुनावमा पैसा खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ । तपाईँले पनि कुरो सुनिराखे बुझिराखे हुन्छ । कसैको पनि सुपथ कमाइको पैसा खानु हुँदैन । रगत पसिनाको पाप लाग्छ । तर,‌ यी नेता मन्त्री भनाउँदाहरुले देश लुटेर ल्याएको पैसा खाँदा केही फरक पर्दैन । कसैले पनि आफ्नो श्रम पसिनाको कमाई बाँड्दैन । यिनीहरुले चाहिँ करोडौँ करोड कसरी बाँड्छन ? तिनका तलब भत्ताको मात्रै पैसा हो र त्यो ? नेता मन्त्री भएपछि पैसा आकाशबाट बर्षिन्छ ? यति जाबो कुरा बुझ्नु हुन्न भने के भोट माग्दै गाउँगाउँ हिँड्नु हुन्छ ? अर्को एउटा कुरा मत किन्न बाँडेको त्यो पैसामा रगतको छिटा हुन्छ, त्यसकारण त्यो पैसा मठ मन्दिर देेवीथानमा चढाउँदा भगवान भगवतीले आशीर्वाद होइन श्राप दिन्छन् । त्यो पैसा माता पिताको पाउमा राखेर ढोग्नु हुँदैन, चेलीबेटी ज्वाइँ भिनाजुलाई दक्षिणा दिनु पनि हुँदैन । ती निर्दोषहरुमा पाप सल्किन्छ । राजनीतिको कल्मसले सबैलाई मैल्याउँछ, धमिल्याउँछ ।
बूढा के भन्दा राँन् भनेर मैले अझै अगाडि भनेँ – पैसा खाएर त्यसैलाई भोेट दिनै पर्छ भन्ने के छ ? तिनले बाँडेको पैसा मजाले खाने हो मत आफ्नो ठाउँमा खसाल्ने हो ! अँध्यारोमा राखेको ढुँडी परेका, त्यो पैसाले बैंक कस्तो हुन्छ देखेकै छैन, म्यानेजर कत्रो हुन्छ थाहै छैन, कानून के ह‌ो सुनेकै छैन । ती नेता मन्त्रीले आफू बाँचेको धरतीप्रति, मातृभूमिप्रति बेइमान गर्दा हुने, हामी चाहिँ ती बेइमानप्रति किन इमान्दार बन्नु पर्ने ? हेर्नु माइलाबा तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही मत खसाउँला त्यसमा केही छैन, मेरो कुरो काँटी ठोके जस्तै पक्का हुन्छ । तर, त्यो बाँडिने पैसाको चाँजो मिलाई दिनुपर्छ, जोहो गर्दिनु पर्छ । त्यसरी आएको पैसा म असल काममा लाउँदिन, मलाई थाहा छ । त्यस्तो देश दुनिँयाको रगत पसिनाले मुछिएको पैसाले जग्गा किन्यो भने पैरो जान्छ, खोलाले, बाटोले लान्छ, झगडा लाग्छ, कसैलाई ऋण दियो भने साँउ ब्याज नै खाइदिन्छ, नानीको स्कूल फिस बुझायो भने विद्यानाश हुन्छ, घर बनायो भने त्यो घरमा कहिल्यै सुख शान्ति हुँदैन । त्यस्तो पैसाले सन्तान दर्सन्तान पिर गर्छ । यस्ता कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ ।
हुन त त्यो पापको धनलाई धोइ पखाली गरेर गहँुत पानी सुनपानी छर्किएर कानूनको किताब छुवाएर हामी जस्ता गरीब गुरुव्ााले असल काममै लाउँदा पनि हुने हो तर पनि म त्यो धन असल कार्यमा प्रयोग गर्दिन । पापको धन पाप कार्यमै लाउँछु । यसो कहिलेकाहीँ ऐँ‌ठनपानीको तलतल लाग्छ, बाबु बाजेदेखि खाई ल्याएको गोस चबाउन मन लाग्छ, कहिले काहीँ जुवा तास पनि खेलिन्छ । यस्ता कामका निम्ति पसिनाको कमाई खर्चिने कुरै भएन । त्यही पापको धन ल्याएर यहाँ मिल्काउनु पर्छ । यही कामको निम्ति चुनावमा बाँडिने पैसाको खोजी गरेको । चर्को घाममा झण्डा बोकेर, गीत गाउँदै नाच्दै भोट माग्न हिँड्न सके साँझमा केही बन्दोवस्त गर्दा हुन्, आफू त्यो सकिँदैन । यत्रो निर्वाचनको चाडमा हामी काका भतिज चाहिँ थुक निल्दै बस्नु ?
ऐँ‌ठनपानीको कुरा गरेपछि बूढाको पनि मुख रसाएछ क्यार !‌ बल्ल अलिकति कुरो चुहाए – अघिल्लो चुनावको भन्दा पाँच सय थपेर दिने भनेका छन् । यो कुरा काका भतिज भन्दा बाहिर नजाओस् । तँ पनि भोलिदेखि भोट माग्न हिँड् । तर कुरो चुहिएला ! जनताले मत जहाँसुकै हालुन् त्यसको मतलब भएन तर जोबाट रकम प्राप्त हुन्छ त्यो उम्मेदवारलाई मत खसाल्छौँ भनेर मुखले बोल्दिए भने हाम्रो मिसन पूरा हुन्छ । भ्रष्टाचारको पैसाले मत किनेर चुनाव जित्न खोज्ने धन्धुकारी मुसण्डले जित्नु पनि हुँदैन । कुरो गुपचुप राख्नु । म एक्लै भाग बसौँला भन्दै थिएँ खुरुन्दारै गरिस् अब पैसा तान्ने जुक्ति बुद्धिमा हामी मिलेर लाग्नु पर्छ ।
मैले भनेँ — यताको कुरो मिल्यो अब साँच्चा साँच्ची कुरा गरौँ । चुनावचाहिँ कसले जित्ला होउ माइल्ाा बा ? एकातिर दुई-तीन वटा पार्टी अर्कातिर एउटा पार्टी भनेपछि कसले जित्छ त्यति पनि जान्दैनस् ? यस्तो कुरा पनि सोधिरहनु पर्छ ? दुई तीन पार्टी धुरिँदा पनि चुनाव जितेनन् भने यिनले के राजनीति गर्छन् ? कथम कदाचित चुनाव हारे भने यी दुई तीन पार्टीहरुले पहेँलो बस्त्र लगाएर अलख जगाउँदै काँशीतिर बाटो लागे हुन्छ । राजनीति नै गर्ने भनेपछि होला नि त यिनीहरुसित अलिकति इख ! इख नभएको मान्छे र विष नभएको सर्प गँडेउला बराबर ! पैसावालाको पैसा खाने जुक्ति लाउनु एउटा कुरो हो तर आफ्नो धर्म त कहाँ छोड्नु हुन्छ त ! फलानाले भोट जित्छ, उसैलाई मत हाल्नुपर्छ भनेर मुखले बोलिदिने भनेको यसो पैसो पचाउने मेलो पो त !
Previous झापामा ३१ हजार घरमा छैन शौचालय
Next निलडेभिडको दिल्ली सपना
Pingback: 29 aprelja prazdnik
Pingback: top makeup looks
Pingback: mcat overview
Pingback: g31vs-m drivers
Pingback: Used Miscellaneous Modules by Dionex Corporation at used-line
Pingback: vdoh vydoh i my opjat igraem v ljubimyh
Pingback: muzhchina vodolej forum
Pingback: музыкальный инструмент в виде диска
Pingback: бакинское время
Pingback: property 24 gauteng
Pingback: kishechnye koliki u vzroslyh
Pingback: was wollen wir trinken traduction
Pingback: Tema 23. Gram-positiu Apunte
August 16, 2017 206,502
August 19, 2017 23,319
gay male sex toys: gay male sex toys [...]we like to honor quiteafew other world-wide-web web-sit...
mp3 download: mp3 download [...]Here is an excellent Blog You may Uncover Fascinating that we...
gay male using toys: gay male using toys [...]check below, are some entirely unrelated web sites to o...
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]one of our visitors not long ago suggested the following website[......
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]we like to honor quiteafew other net web sites on the internet, ev...